မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင် ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
Dtsch Arztebl Int ။ ဇွန် 2013; 110 (25): 425-431 ။
ဇွန် 21, 2013 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3238 / arztebl.2013.0425
ဒီ Developmental ကာလထဲသို့ Neuroscientific Insights
Kerstin Konrad, ပါမောက္ခဒေါက်တာ rer ။ နတ်။ ,*,1 ခရစ္စ Firkဒေါက်တာပါရဂူဘွဲ့,2 နှင့် ပတေရုသ J ကို Uhlhaasဒေါက်တာပါရဂူဘွဲ့3
စာကိုကြည့်ပါစာပေးစာယူ (အယ်ဒီတာမှစာတစ်စောင်): နောက်ထပ်အချိန်ရိုက်ယူခြင်းစာမျက်နှာ 732a အပေါ် "။
စာကိုကြည့်ပါစာပေးစာယူ (အယ်ဒီတာမှစာတစ်စောင်): Neuromolecular တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်စာမျက်နှာ 732b အပေါ် "။
စာကိုကြည့်ပါစာပေးစာယူ (အယ်ဒီတာမှစာတစ်စောင်): ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုယာယီ Limited နှင့်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်စာမျက်နှာ 733a အပေါ် "။
စာကိုကြည့်ပါစာပေးစာယူ (ပြန်ကြားချက်): စာပြန်ရန်ခုနှစ်တွင်စာမျက်နှာ 733b အပေါ် "။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးအကြားအသက်တာ၏အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, မြီးကောင်ပေါက်တခါတရံပြင်းထန်သောအန္တရာယ်မှာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုချပြီး, လွှဲအသစ်အတွေ့အကြုံများ, နှင့်ခိုင်ခံ့သောစိတ်ခံစားမှုရှာကြာလော့။ ဂျာမနီမှာတော့ဥပမာ, 62 မှ 15 အသက်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြားအားလုံးသေဆုံးမှု 20% စိတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ Neuroscientific ရှင်းလင်းချက်ပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်အဆိုပြုခံပြီ စိတ်ထဲတွင်ဤရှင်းလင်းချက်များနှင့်အတူတဦးတည်းမြီးကောင်ပေါက်နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်၏သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများကိုရရှိနိုငျသညျ။
ကျနော်တို့ရွေးချယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဦးနှောက်ရဲ့တည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ပတ်သက်. PubMed ဒေတာဘေ့စထဲကနေပြန်ထုတ်ဆိုင်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာနှင့် neuroscience အတွက်နယူးတွေ့ရှိချက်ဦးနှောက်၏အခြေခံပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နေရာယူကြောင်းထုတ်ဖေါ်။ postnatal ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်, မီးခိုးရောင်ကိစ္စအများဆုံးသိပ်သည်းဆမူလတန်း sensorimotor cortex အတွက်ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိလျက်, prefrontal cortex နောက်ဆုံးရင့်ကျက်နေသည်။ ပိုမိုရင့်ကျက် subcortical ဒေသများနှင့်ဒီထက်ရင့်ကျက် prefrontal ဒေသများအကြားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုရှိကွောငျးဒါ Subcortical ဦးနှောက်ဧရိယာများ, အထူးသဖြင့် limbic စနစ်နှင့်အကျိုးကိုစနစ်, အစောပိုင်းကဖွံ့ဖြိုး။ ဒါကအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပါအဝင်ပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူပုံစံများများအတွက်အကောင့်လိမ့်မည်။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏မြင့် plasticity cortical circuitry အပေါ်အထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့သောဆိုးကျိုးများကွိုးစားအားထုမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုခွင့်ပြုထားသည်။ ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အသိဥာဏ်ပညာနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမှန်ကန်စေသည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းအန္တရာယ်လွှမ်းမိုးမှုမှတံခါးကိုဖွင့်လှစ်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးအကြားအသက်တာ၏အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလွတ်လပ်တဲ့, တာဝန်ရှိလူကြီးသို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့၏, ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏မသာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတာဝန်များကိုထူထောင်မှုနှင့်ပွားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာ, အနာဂတ်ရှုထောင့်, လွတ်လပ်ရေး, Self-ယုံကြည်မှု, မိမိကိုယ်မိမိထိန်းချုပ်နှင့်လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှု (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပါဝင်သည်1).
အတော်များများကမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများ (အန္တရာယ်များကို ယူ. အစွန်းရောက်စိတ်ခံစားမှုရှိခြင်းကိုခံစားဖို့ကျရောက်နေတဲ့များမှာ2, 3) ။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်များအပြုအမူကျန်းမာရေးတစ်ခုမြင့်မားသောစွန့်စားမှု (ချိတ်ဆက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းစာရင်းဇယားများတွင်ထင်ဟပ်နေသည်4) ။ ဂျာမနီမှာတော့ဥပမာ, 62 မှ 15 အသက်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြားအားလုံးသေဆုံးမှု 20% စိတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သေမင်း၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများမော်တော်ယာဉ်မတော်တဆမှုအခြားမတော်တဆမှု, အကြမ်းဖက်မှုနှင့် Self-ဒဏ်ရာ (များမှာ5) ။ အမြင့်ဆုံးသောသေဆုံးမှု, လက်နက်များတင်ဆောင်တစ်ခါးပတ်မှာမပါဘဲမောင်းနှင်, အရက်မူးကားမောင်းဖို့တွေကပေါ်ကနေပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း (ဖြစ်ပါတယ်4).
ယင်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် စားပှဲ, ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအလားတူကြိမ်နှုန်းမှာအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဥပမာ, ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားဆေးလိပ်သောက်၏ပျံ့နှံ့နီးပါးနှင့်ညီမျှဖြစ်လာသည်အချို့အရည်အသွေးကွဲပြားမှုရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း: Boys ပိုပြီးစီးကရက်ဆေးလိပ်, သူတို့သည်လည်းပိုပြီးလေ့ထိုကဲ့သို့သောဆေးပြင်းလိပ်, အနက်ရောင်ဆေးရွက်ကြီးအဖြစ် "ခက်" ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, မရှိသောစီးကရက်။ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများလည်းကွဲပြားခြားနားသောယမကာသောက်ရ: မိန်းကလေးများစပျစ်ရည်ကိုမသောက်ရလေ့ရှိပါတယ်စဉ်ယောက်ျားလေးများယောက်ျားလေးများကပိုမကြာခဏနှင့်ပိုကြီးတဲ့ပမာဏသာရှိအရက်မသောက်ရစတာတွေ, ဘီယာနှင့်အခက်ခဲအရက်မသောက်ရမှတောက်ပသောစပျစ်ရည်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ကအစပိုပြီးလေ့မိန်းကလေးတွေထက်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစားသုံးကြသည်။ ယောက်ျားလေးများမတော်တဆမှုပိုမိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကားမောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကပိုအန္တရာယ်များကိုယူပါ။ မိန်းကလေးများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အာဟာရ၏ဧရိယာ (ဥပမာ Diet, မမှန်စားသုံးခြင်း) တွင်ကျန်းမာရေး-အန်တရာယျအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုများပါတယ်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေအဘို့မိမိတို့သက်ရောက်မှုတွေသို့အသစ်အ neurobiological ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုစိုးရိမ်။ ကျနော်တို့ ",", မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / အပျိုဖော်ဝင် "ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြု. PubMed ဒေတာဘေ့စအတွက်, ဂျာမန်စာကြည့်တိုက်ကတ်တလောက်အတွက်သက်ဆိုင်ရာစာပမြေားအတှကျရှေးခယျြရှာဖွေရေးနှင့်အတူဦးနှောက် / အာရုံကြောသည်ဤပြဿနာများကိုလေ့လာခဲ့" နှင့် "ဖှံ့ဖွိုးတိုး။ " Cited စာပမြေားကိုလညျးထညျ့သှငျးစဉျးစားခဲ့ကြသည်။ အထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလူ့ neuro-ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှပေးဆောင်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တိုင်အောင်, ဦးနှောက်၏ဗိသုကာနဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုအဓိကပြောင်းလဲမှုကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလကန့်သတ်ခဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာနှင့် neuroscience အတွက်ယေဘုယျယူဆချက်နှင့်အသက်တာ၏ပထမငါးသို့မဟုတ်ခြောက်နှစ်ရှိ၏။ (ကသမိုင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့, [တွေ့မြင်6] ။ ) ထိုအတောအတွင်းသို့သော်သစ်ကိုသိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေတွေ့ရှိဒီယူဆချက်တစ်ခုတည်းဖြတ်မူအနိုင်အထက်ပါပြီ။
အကြီးစား longitudinal လေ့လာမှုများ (ဦးနှောက်၏အခြေခံပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသကြ7) ။ အတော်များများက synapses (ဖျက်သိမ်းနေကြ8) အနေဖြင့်, တစ်ချိန်တည်းမှာ, အဖြူရောင်အမှု၌တစ်ဦးတိုး (ရှိ9, 10), နှင့် neurotransmitter စနစ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ် (11, e1, e2) ။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နေရာယူသောခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မရငျ့ဖြစ်စဉ်များအများကြီးပိုပြောင်းလဲနေသောမူလကယူဆထက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအသက်တာ၏ဤကာလ၏ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း cortical ဆားကစ်တစ်ခုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ရာအရပ်ကိုကြာနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အပြောင်းအလဲတွင်ထင်ဟပ်ကြောင်းကောက်ချက်ချနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သည် (12).
စိတ်ဝင်စားစရာ, လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဤပုံစံ nonhuman မျောက်ဝံများ၏ထံမှကွဲပြားနေသည်။ ဥပမာ, (လူသားကဲ့သို့) မျောက်တွေကိုနှင့်ချင်ပန်ဇီမျောက်နုဦးနှောက်နှင့်အတူမွေးဖွားလာနေကြတယ်, ပေမယ့်, မျောက်များအားလုံးကို cortical ဦးနှောက်ဧရိယာများ (တူညီမှုနှုန်းမှာရင့်ကျက်13) ။ လူကို, သူသခှေဲစိတျခွငျးလေ့လာမှုများ synaptogenesis synapses အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက်အများကြီးပိုပြီးနှေးကွေးစွာဖွဲ့စည်းထားပါသည်နေစဉ်အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံထဲမှာအများဆုံး, လအနည်းငယ်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် cortices ရောက်ရှိကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏သင်တန်းကျော် cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦး heterochronous ပုံစံတစ်ခု synchronous နေ switch သည် (ရှိ၏8) ။ ဤသည်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အားယူဆရ (ကျောင်းပညာရေး, ဂီတ, နှုတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်အသုံးပြုပုံဥပမာအထူးသလူ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော် sociocultural ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မြှုပ်ထားခြင်းမှတဆင့်ဝယ်ယူအထူးသဖြင့်သူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်14()ပုံ 1).
အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတခြားမျောက်ဝံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူကိုပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာသည်။ အဆိုပါပုံ 100 μmလျင် Synaptic သိပ်သည်းဆကိုပြသ2 လူကို (အနီ), ချင်ပန်ဇီမျောက် (အပြာ) နှင့်စမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များ (သံလွင်အတွက်အသက်တစ် function ကိုအဖြစ် prefrontal cortex အတွက် ...
ဦးနှောက်ကိုအပြည့်အဝနှောက် cortex မကြာမီသူ့ရဲ့လုပျသငျအသံအတိုးအကျယ်ရောက်ရှိသောသဘော, ဘွားမြင်သောနောက်အတော်လေးမကြာမီကြီးထွားလာနေပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အရေးကြီးသောအခြေခံအဆောက်အဦးရငျ့ဖြစ်စဉ်များ (အခြေခံအဆောက်အဦးပုံရိပ်လေ့လာမှုများပြသသည်အတိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ဆက်လက်15, e3- e5) ။ မီးခိုးရောင်အမှုအများဆုံးသိပ်သည်းဆထိုကဲ့သို့သော dorsolateral prefrontal cortex အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားအသင်းအဖွဲ့ဒေသများရှိမူလတန်း sensorimotor cortex အတွက်ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးသောယုတ်ညံ့ parietal gyrus နှင့်: ဦးနှောက်ထဲမှာ, မီးခိုးရောင်ကိစ္စဒါကြောင့်စကားပြောဆိုရန်, ရှေ့ပြန်ထံမှရင့်ကျက် ယင်းထက်သာလွန်ယာယီ gyrus ။ ဤသည် (ဥပမာ prefrontal Cortex-ရာထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို subserves အဖြစ်, ထိုအထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ဧရိယာများကိုဆိုလိုသည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာတာဝန်များကိုနှင့်အတူဆက်စပ် cortical ဒေသများထက်ဆုံးဖြတ်ချက်များ-ရင့်ကျက်မှုအန္တရာယ်ကိုအကဲဖြတ်16()ပုံ 2).
အဖြူရောင်ကိစ္စနှင့်လူ့တသက်တာကျော်တိုကျရိုကျ cortex ၏မီးခိုးရောင်အမှုဖွံ့ဖြိုးရေး; တစ်ခုချင်းစီကိုလိင်များအတွက်သီးခြား curves ။ ကနေ (7ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်း) Giedd ဖြစ်မှု, et al .: ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ 1999; ...
သူသခှေဲစိတျခွငျးတွေ့ရှိချက် (ဤမီးခိုးရောင်ကိစ္စအပြောင်းအလဲများကို Synaptic တံစဉ်များကိုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု17) ။ အတော်များများက synapses အကြာတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဖယ်ရှားဖြစ်ကြောင်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤသည်ဆိုလိုသည်မှာဆက်လက်ရှင်သန်သော synapses ပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်ကြောင်းသူများဖြစ်ကြသည်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံကို-မှီခိုလမ်းအတွက်ဖြစ်ပေါ် "ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ " အသကျဒီအအဆင့်အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအပြောင်းအလဲများကိုဥပမာများအတွက်အကောင့်အံ့သောငှါကတခြားဆယ်လူလာယန္တယားတစ်ခုလျှော့ချရေးလည်းရှိပါတယ် glial ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုနှင့် myelination တစ်ခုတိုး (ထဲမှာ18).
မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာလျော့ကျသကဲ့သို့, အဖြူကိစ္စ volume ထဲမှာတိုးပွားစေပါသည်။ အဖြူရောင်ကိစ္စလျှင်မြန်စွာအာရုံကြောသတင်းအချက်အလက်လုပ်ဆောင်သွားရန်ကြောင်း myelinated axon ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အဖြူရောင်အမှုပမာဏ (အစောပိုင်းလူကြီးသို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေအစဉ်မပြတ်တိုးပွါး19) ။ ဒါဟာချဲ့ထွင်မှု (oligodendrocytes နေဖြင့်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် axon ၏တိုးတက်သော myelination ရန်, ကြောင့်ဖြစ်ယူဆနေသည်10) ။ Myelination သာလွန်ဦးနှောက်ဒေသများသို့နှင့် posterior ထံမှ anterior ယုတ်ညံ့ခြင်းမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြတယ်။
ဦးနှောက် function ကို
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ခန္ဓာဗေဒပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖြစ်စဉ်များလေးနက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်, အဲဒီမှာအမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏တိုးတက်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆိုလိုသည်မှာအတွေးနှင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်အကြောင်း, သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပါသည်နှင့်ဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအသစ်ရှုပ်ထွေးသောအခွအေနေတာဝန်များကို (ရန်ပြင်သာပြောင်းသာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု20) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့အဲဒီအခြေခံသိမြင်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်လူမှုရေး-ထိခိုက်စေအစွမ်းအစ၌ပြောင်းလဲ, စိတ်၏ဒါခေါ်သီအိုရီ (အခြားရဲ့နေရာအတွက်စိတ်ပိုင်းမိမိကိုယ်ကိုထားရန်ဆိုလိုသည်မှာနိုင်စွမ်း), နှင့်စာနာမှု (21).
အဆိုပါအာရုံကြောအဆငျ့မှာဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကအခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်လျော့ကျနိုင်အောင်, ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်မကြာခဏလူကြီးများထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်နည်း focal activation ပုံစံရှိသည်နှင့်အာရုံကြောအရင်းအမြစ်များ၏ထိရောက်သောစုဆောင်းမှုအသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွါးကြောင်းပြသကြ လက်မှာတာဝန်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းများထက် (22) ။ ဒါဟာသေးအာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတ၏ဒီပုံစံသို့မဟုတ်ဇီဝစိတ်ပိုင်းဖြတ်လွှမ်းမိုးမှု-မှီခိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ကြောင့်အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, သွပ်ရည်စိမ် et al: imaging လေ့လာမှုများလည်းမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေများတွင် limbic ဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှုကြီးထွားပြီပြသခဲ့ကြသည်။ (23) အကျိုးကိုများ၏မျှော်လင့်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ထက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်နျူကလိယ accumbens တစ်ဦးထက်ပိုသောမှတ်သား activation နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာဤသုတေသီများသည်လည်း (ထိုနျူကလိယ accumbens နှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' တစ်ဦးချင်းစီစွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေသဘောထားကိုအတွက် activation အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့24).
ထိုမှတပါး, အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် functional ဖြစ်စေနှစ်ဦးစလုံးပုံရိပ်လေ့လာမှုများကို (prefrontal cortex ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံခံခြင်းနှင့် subcortical အဆောက်အဦများနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းပြသကြ25, 26, e6) ။ ဤသည်သိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဖြစ်စဉ်များအပေါ်တိုကျရိုကျဦးနှောက်ဒေသများတစ် သာ. ကြီးမြတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆိုလို။ သိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောဆားကစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေခံအဆောက်အဦး neurobiological ရငျ့၏တစ်ဦးတည်းသောပစ်မှတ်အဖြစ်မှတ်မရသင့်သည်, အစား, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာတောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူမျိုးရိုးဗီဇအချက်များတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အပြန်အလှန်ဖြစ်ရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုထိခိုက်ကြောင့် subserving ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ (မိဘကလေးအပြန်အလှန်အားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်27).
အာရုံကြော circuitry တစ်လေးနက်တဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နေရာယူကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းနောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်က high-အကြိမ်ရေအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့် synchronous ဦးနှောက်လှိုင်း electroencephalograph (EEG) လေ့လာမှုများအပါအဝင် electrophysiological လေ့လာမှုများ, (ထံမှဆင်းသက်လာကြသည်28) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ (0-3 Hz) တွင်ကြွင်းသောအရာမှာ oscillatory လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကျဆင်းမှုနှင့် theta (4-7 Hz) တပ်သားများနှင့်တစ်ဦးဟာ alpha (8-12 Hz) တွင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် beta ကိုခညျြအနှော (13 နှင့်ဆက်စပ်နေသည် -30 Hz) ။ အလုပ်တခုကို-မှီခိုလှိုနှင့်တကွ, theta, alpha နှင့် beta ကိုခညျြအနှောတိုးအတွက် oscillatory လှုပ်ရှားမှုထပ်တူများ၏တိကျ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ညှိလှိုနှောင်းပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတနီးကပ်စွာတည်ဆောက်ပုံ (ခန္ဓာဗေဒ) ရငျ့ဖြစ်စဉ်များမှအဖြစ်ပြင်းထန်စွာလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသုတေသနပြုခဲ့ကြရသော neurotransmitter စနစ်များအတွက်အခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲများ, ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများအတွက်တစ်ဦးက neurobiological ရှင်းလင်းမော်ဒယ်
ပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူကိုရှင်းပြဖို့ပိုပြီးသြဇာ neurobiological မော်ဒယ်များတစ်ခုမှာ (New York မှာ Casey ၏အဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်29, e7()ပုံ 3).
subcortical နှင့် prefrontal ဦးနှောက်ဧရိယာ Nonlinear ရငျ့ဖြစ်စဉ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အာရုံကြောကွန်ရက်တစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ (မှပြုပြင်12) Casey BJ, ဂျုံးစ် RM, Hare က TA: အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ သိပ္ပံ 2008 ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်; 1124: ...
အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ထံမှ neuroanatomical တွေ့ရှိချက်များနှင့်ဒေတာများအပေါ်အခြေခံပြီးဒီ model ၏အဓိကရဝုဏ်,23, 24, 30, 31), (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် subcortical ဦးနှောက်ဒေသများ၏အတော်လေးအစောပိုင်းရငျ့နှင့် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုဒေသများ၏အတော်လေးနှောင့်နှေးရငျ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အာရုံကြောမညီမမျှတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပုံ 3), စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေတွေမှာ, ပိုရင့်ကျက် limbic နှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များနေဆဲအတော်လေးနု prefrontal ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အကျော်, ဒါကြောင့်ပြောဆိုရန်, အထက်လက်ရဖို့, ထိုရလဒ်နှင့်အတူ။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်ဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်နိုင်ခြင်းသဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုခေါ်ဆောင်သွားမရသင့်ပါတယ်။ ယင်းအစား (ဥပမာ, အခြားမြီးကောင်ပေါက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်အခါ, တစ်ဦးဆုလာဘ်၏အလားအလာကိုလည်းမရှိ) အထူးသဖြင့်စိတ်ခံစားမှုဝန်ကိုထမ်းရွက်ဖြစ်ကြောင်းအခြေအနေများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ (ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များထက်အပြုအမူကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုမြင့်တက်23, 24, 32) ။ ဒါကမော်ဒယ် (စမ်းသပ်လေ့လာမှုများတစ်စီးရီးအတွက်စမ်းသပ်ပြီးထားပြီးသေတ္တာ).
သုတေသီများအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်တစ်ခေတ်တည်း (ရွယ်တူ) ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် probands များ၏အသက်အရွယ်အပေါ်မှီခိုခြင်းရှိမရှိလေ့လာဖို့ (13 နှစ်နှင့် 16 နှစ်အတွင်း 18, 22 နှစ် 24) သုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်များစုဆောင်း။ တစ်ဦးအသွားအလာအလင်းအနီရောင်လှည့်သည်အထိသင်တန်းသားများကိုသူတို့အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှမောင်းခဲ့သည့်အတွက် Simulator ကိုကားမောင်းအမျိုးအစားထဲမှာထည့်သွင်းခဲ့သည်
နှင့်နံရံတစ်ခုထင်ရှား။ , ကားကိုမကြာမီအလုံအလောက်ရပ်တန့်မခံခဲ့ရပါကထိုအုတ်ရိုးသို့ပျက်ကျ, နှင့်ကားမောင်းသူမှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သင်တန်းသားများကိုဖြစ်စေတစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ, Simulator ကိုသုံးပုဂ္ဂိုလ်များအုပ်စုများရှိကြ၏။ 13 နှစ်အရွယ်ဖို့ 16- အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများအတွက်သာသူတို့ရဲ့ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်သင်တန်းသားများကိုထက်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်ပိုပြီးဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမောင်းနှင်မှုအပြုအမူ (ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်း၏လွတ်လပ်သောခဲ့သည်33).
ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်သည့်အချို့အပြုအမူတွေ၏အန္တရာယ်နည်းတူကောင်းစွာအဖြစ်မေးခွန်းလွှာမှာသူတို့ကိုအကြောင်းမေးနိုင်တဲ့အခါလူကြီးများကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်ကိုဥပမာ, ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဂေဟဗေဒခိုင်လုံသောအမူအကျင့်စမ်းသပ်မှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့တဲ့အခါမှာတစ်ဦးတည်း (သို့ပွုထက်မြီးကောင်ပေါက်အုပ်စုများတွင်ပိုမိုအန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြောင်းပြသ33) ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်, ဒီအသက်အရွယ်မှာအန္တရာယ်များအပြုအမူ-၏လူမှုရေးမျက်နှာများ၏အကျိုးအတွက်အများကြီးပိုမြင့်မားအန္တရာယ်သူ့ဟာသူထက်ယူဆရကြောင်း rated ရွယ်တူ-ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက prefrontal နှင့် limbic ဦးနှောက်ဒေသများ၏ nonlinear ရငျ့ပုံစံနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီ model များနှင့်အညီ, ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များအပေါ်သုတေသနပြု (အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုအသိပညာတှေအပျေါအခွခေံအစီအစဉ်များကိုတစ်ဦးချင်းစီအကြိုးခံစားခှငျ့ပေါ်နှင့်လူမှုရေးအရည်အချင်းကိုနှင့်ခုခံ၏သင်တန်းတွေအပေါ်အာရုံစိုက်ဖို့အတွက်များထက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး34).
ဒါဟာ cortical နှင့် subcortical ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအကြားကဒီယာယီမညီမမျှထံမှတစ်ဦးချင်းစီမှလောကအတွက်မယ်ဆိုလျှင်မူကား, အလုပ်လုပ်တဲ့ဘာအကြိုးမေးရန် intriguing ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူငယ်တစ်ဦးလူတစ်လွတ်လပ်ရေးရရှိသည်ထားတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်လူ့မျိုးစိတ်မှထူးခြားသောမျှမက, တူညီတဲ့အသက်အရွယ်၏အခြားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူတိုးပွားလာအသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်လူမှုရေး interaction က (အဖြစ်ကောင်းစွာများစွာသောအခြားမျိုးစိတ်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်35) ။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များအပြုအမူလွှဲနှင့်တဦးတည်းလက်ပေါ်အသစ်များကိုအတွေ့အကြုံများ ( "အာရုံခံစားမှုရှာ") များအတွက်ရှာဖွေရေးအကြားဇီဝ dysequilibrium ၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်ရှုမြင်နှင့်အမျှသေးအခြားအပေါ်နု Self-စည်းမျဉ်းစွမ်းရည်နိုင်ပါတယ် (2); ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သူတို့ဥပမာ, သူတို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းမိသားစုအပြင်ဘက်တစ်ဖက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နိုင်အောင်, မိသားစုလုံခြုံရေးဇုန်ထဲကနေဝေးကိုချိုးဖျက်ဖို့မြီးကောင်ပေါက်ကို enable ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏နု (သင်ယူမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချို့အမျိုးအစားများကိုမျက်နှာသာဟန်1).
တကယ်တော့တစ်ဦးချင်း၏တစ်သက်တာကျော်, ဦးနှောက်, အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာအတွေ့အကြုံကိုလေ့လာသင်ယူအချို့အမျိုးအစားများအဘို့ပြင်ဆင်သောမျိုးစုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြတင်းပေါက်ဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေ, အထူးသဖြင့်လူမှုရေး-ထိခိုက်စေလှုံ့ဆော်မှုမှအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ဦးစားပေး၏တာဝနျမှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ပုံမှန်အဆိုပါသိမြင်မှုစတိုင်သည်, ဆယ်ကျော်သက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတာဝန်များကိုဖို့အကောင်းဆုံးသင့်လျော်ပေမည်။ ဤသည်ကိုလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်ပကတိသဘောအရအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ system ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမရနိုငျနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လစ်လပ်ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ပြည်နယ်စဉ်းစားမရသင့်ကြောင်းဆိုလို။
ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် pubertal ဟော်မုန်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို
အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းမျိုးဆက်ပွားစနစ်၏ရငျ့အဆိုပါ gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းမြင့်တက်ပြင်းအားနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဦးနှောက်ကို Steroid တစ်မျိုး receptors ၏မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆရှိပါတယ်, ကလိင်ဟော်မုန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အာရုံကြောကွန်ရက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုကြောင်း, အရှင်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ Sisk နှင့် Foster (36, e8) ဦးနှောက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၏ဒုတိယလှိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုအစောပိုင်းက, perinatal အဆင့်အပေါ်တည်ဆောက်ခြင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီ model အဆိုအရ, အပျိုဖော်ဝင်များ၏ဟော်မုန်းဟာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ထပ်မံတည်ဆောက်ပုံများထိခိုက်စေ, အာရုံကြောကွန်ရက်များဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုကိုသက်ဝင်ဖို့ sensitized ဖြစ်ကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဦးနှောက်ရလဒ်များအမြဲတမ်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်း, ဒါကြောင့်။ pubertal ဟော်မုန်းများ၏မြင့်တက်ပြင်းအားယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်: မိန်းကလေးတွေအတွက်အီစထိုဂျင်စဉ်ယောက်ျားလေးများအတွက်အန်ဒရိုဂျင်အတွက်မြင့်တက်လာပုံ, corticotropin-releasing ဟော်မုန်း (CRH) ၏ hypothalamic Secret ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် အထက်သို့အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးထိန်းညှိ။ အန်ဒရိုဂျင်ကယောက်ျားလေးများထက်ပိုဒဏ်ခံစေနေစဉ်အီစထိုဂျင် (စိတ်ဖိစီးမှုမှမိန်းကလေးငယ်များကိုပိုဖြစ်ပေါ်နိုင်စေ37).
ယခုတိုငျအောငျ, အစောပိုင်းကလေးဘဝအပေါ်သုတေသနပြုသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်မီဒီယာကနေအများဆုံးအာရုံစိုက်မှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဆက်လက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအပေါ်တစ်ဦးအစွမ်းထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကြောင်း, သို့သော်ပွပါ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များ၏ဦးနှောက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ cortical circuitry အပေါ်အဓိက, ကတည်မြဲသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်ရသော plasticity ၏သစ်တစ်ခုအဆင့်တဆင့်တတ်၏။ ဤသည်ပညာရေးအဘို့အခွင့်အလမ်းသစ်များဖွင့်ဖွင့်လှစ်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြီးကောင်ပေါက်နိုင်အောင်အလွယ်တကူစိတ်ခံစားမှုကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်သောအလွန်အကြောင်းပြချက်များအတွက်, သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းလေ့ကျင့်ဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်ရာအရပျကိုယူပြီးအတွေ့အကြုံများကိုသင်ယူကနေအကျိုးရပ်တယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်များအပြုအမူတစ်ခု neurobiological အခြေခံရှိကြောင်းပေးထားသော, ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားမှုလုံးဝကျရှုံးမှခညျြနှောငျပုံရသည်။ ဒါဟာလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်တွင်စိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံများကိုရှိသည်ဖို့မြီးကောင်ပေါက်ဖွင့်ဖို့နှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်း (ကြော်ငြာအချို့အမျိုးမျိုးဥပမာတားမြစ်ချက်) နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြုသဘောမော်ဒယ်များ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်မှတဆင့် Non-အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူမှုရေးဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ဖို့ကပိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားဆပ်ပြာအော်ပရာအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ခဲဇာတ်ကောင်မိတ်ဆွေများကိုကစီစဉ်နေတဲ့ Hard-အရက်သောက်ပြိုင်ပွဲထဲကရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပေလိမ့်မည်။
ထို့အပွငျမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အာရုံကြော plasticity ၏ကာလကြာရှည်ကာလကိုလည်းဥပမာအန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှဆယ်ကျော်သက်ပိုပြီးအားနည်းချက်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမှန်ကန်စေသည်။ တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများများ၏တွေ့ရှိချက်များ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဆေးခြောက်၏အသုံးပြုမှုကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်တွင်တွေ့မြင်တွေထက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းသိမြင်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဦးနှောက်အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုဥပမာ, အကြံပြု38).
ယခုတိုငျအောငျ, သိမြင်မှ neuroscience လုံလောက်စွာသိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဖြစ်စဉ်များနှင့်၎င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမထားပါဘူး။ ထို့ကြောင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်ရငျ့အတွက်အဆုံးအဖြတ်အဆင့်ဖြစ်ပြီး, ကြောင်းဦးနှောက်ရငျ့ဖြစ်စဉ်များနှစ်ဆယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကျော်လွန်၏အသက်အရွယ်အထိစစ်ဆင်ရေးဖြစ်မည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနားလည်မှုလည်းပညာရေးနှင့်လူမှုရေးမူဝါဒအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိခိုက်စေမဆိုဆုံးဖြတ်ချက်များအကောင့်ထဲသို့ neurobiological အချက်အလက်များယူသင့်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားဗိုလ်မှူးလက်ရှိပြဿနာများကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနဲ့လူငယ်သက်ငယ်ပြစ်မှုပညတ်တရား၏သက်ဆိုင်မှုတရားဝင်၏မေးခွန်းကိုပါဝင်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစောပိုင်းကရင့်ကျက်သော limbic နှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များ, နှင့်သေးအပြည့်အဝရင့်ကျက်မရ prefrontal ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အကြားအချိုးမညီမျှမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မညီမမျှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်စတိုင်များအတွက်အာရုံကြောအလွှာဖြစ်နိုင်ပါသည်, ထိုသို့အန္တရာယ်များအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
Ethan Taub, MD အားဖြင့်မူရင်းဂျာမန်များထံမှဘာသာပြန်ထားသော
ပါမောက္ခ Konrad Vifor Pharma ဆေးဝါး, Ltd. ထံမှဆေးပညာ, Lilly နှင့် Novartis ကုမ္ပဏီများမှထံမှဟောပြောပွဲ honoraria နှင့်သုတေသနထောက်ခံမှု (အပြင်ဘက်ရန်ပုံငွေ) လက်ခံရရှိခဲ့သည်
1 ။ Crone EA ၏, Dahl RE ။ လူမှုရေး-ကိုထိခိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တဲ့ကာလအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုနားလည်ခြင်း။ သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ neuroscience ။ 2012; 13: 636-650 ။ [PubMed]
2 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တာ Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်: အဘယျသို့အပြောင်းအလဲ, ဘာကွောငျ့လဲ? သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004; 1021: 51-58 ။ [PubMed]
3 ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ် Steinberg L. တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008; 28: 78-106 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Eaton DK, Kann L ကို, Kinchen S က, et al ။ လူငယ်စွန့်စားမှုအပြုအမူစောင့်ကြည့်-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, 2005 ။ ရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းအပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာ။ စောင့်ကြည့်တွေကို Summaries ။ 2006; 55: 1-108 ။ [PubMed]
5 ။ Bundesamt Statistisches ။ Unfälle, Gewalt, Selbstverletzung Bei Kindern und Jugendlichen 2010 ။ www.ec-destatic.de.
6 ။ Mason ဆို C. ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2009; 29: 12735-12747 ။ [PubMed]
7 ။ Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999; 2: 861-863 ။ [PubMed]
8 ။ Huttenlocher PR စနစ်, Dabholkar AS ။ လူ့ဦးနှောက် cortex အတွက် synaptogenesis အတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1997; 387: 167-178 ။ [PubMed]
9 ။ Perrin JS, Herve py, Leonard, G, et al ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာအဖြူရောင်အမှုကြီးထွား: Testosterone နဲ့အန်ဒရိုဂျင် receptor ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Neurosc ။ 2008; 28: 9519-9524 ။ [PubMed]
10 ။ Yakovlev PA ဆိုပြီး, Lecours မှာ IR ။ ဦးနှောက်၏ဒေသဆိုင်ရာရငျ့၏ myelogenetic သံသရာ။ ခုနှစ်တွင်: Minkowski တစ်ဦးက, အယ်ဒီတာ။ အစောပိုင်းအသက်တာ၌ဦးနှောက်၏ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း။ အောက်စဖို့ဒ: ဘလက်ဝဲလ်; 1967 ။ စစ။ 3-70 ။
11 ။ Murrin LC, Sandersm JD, Bylund DB ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ adrenergic နှင့် serotonergic neurotransmitter စနစ်များ၏ရငျ့၏နှိုင်းယှဉ်: Juvenile နှင့်လူကြီးများအပေါ် differential ကိုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ထဲကဓာတုပစ်စညျးဆေးဝါးဗေဒ။ 2007; 73: 1225-1236 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ ကာဇီ BJ, ဂျုံးစ် RM, Hare က TA ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2008; 1124: 111-126 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Rakic ​​P ကို, Bourgeois JP, Eckenhoff MF, Zecevic N ကို, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ အဆိုပါမျောက်နှောက် cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတွက် synapses ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ overproduction ။ သိပ္ပံ။ 1986; 232: 232-235 ။ [PubMed]
14 ။ ထပ်တူခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်အဆိုတော်ဒဗလျူ Dynamic ဖွဲ့စည်းခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 69: 191-193 ။ [PubMed]
15 ။ Lenroot RK, Giedd ဖြစ်မှု။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: ခန္ဓာဗေဒသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2006; 30: 718-729 ။ [PubMed]
16 ။ der Adoleszenz အတွက် Konrad K. Strukturelle Hirnentwicklung ။ ခုနှစ်တွင်: Uhlhaas PJ, Konrad K ကိုအယ်ဒီတာများ။ Das Gehirn adoleszente ။ စတုဂတ်: Kohlhammer; 2011 ။ စစ။ 124-138 ။
17 ။ Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့ဦးနှောက် cortex အတွက် Synaptogenesis ။ ခုနှစ်တွင်: Dawson, G, Fischer KW, အယ်ဒီတာများ။ လူ့အပြုအမူများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်။ နယူးယောက်: Guilford စာနယ်ဇင်း; 1994 ။
18 ။ pause T က, Keshavan M က, Giedd ဖြစ်မှု။ အဘယ်ကြောင့်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ neuroscience ။ 2008; 9: 947-957 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Reiss AL, အာဗြံ MT, အဆိုတော် HS, Ross က JL, Denckla ကို MB ။ ကလေးများအတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, ကျား, မများနှင့်အိုင်ကျူ။ တစ်ဦးကထုထည်ကြီးမားသောပုံရိပ်လေ့လာမှု။ ဦးနှောက်။ 1996; 119: 1763-1774 ။ [PubMed]
20 ။ Blakemore SJ, ထိုဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဦးနှောက်၏ Choudhury အက်စ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုနှင့်လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ ကလေးစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်နှင့်မဟာမိတ်စည်းကမ်း။ 2006; 47: 296-312 ။ [PubMed]
21 ။ Blakemore SJ ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လူမှုရေးဦးနှောက်။ သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ neuroscience ။ 2008; 9: 267-277 ။ [PubMed]
22 ။ ကာဇီ BJ, Duhoux S ကို Cohen ကို MM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်: အဘယျသို့ကူးစက်ခြင်း, အကူးအပြောင်းများနှင့်ဘာသာပြန်ချက်ကြောင့်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသနည်း အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 67: 749-760 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, et al ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို Neurosc ။ 2006; 26: 6885-6892 ။ [PubMed]
24 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare T က, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်: အန္တရာယ်မှာဘယျသူနညျး ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2007; 10: F8-F14 ။ [PubMed]
25 ။ Liston ကို C, et al Watts R ကို, စပါး N ကို။ Frontostriatal microstructure သိမြင်မှုထိန်းချုပ်အကျိုးရှိစွာစုဆောင်းမှု modulates ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2006; 16: 553-560 ။ [PubMed]
26 ။ နက်ဂျီ Z ကို, Westerberg H ကို, အဖြူရောင်အမှု Klingberg တီရင့်ကျက်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 16: 1227-1233 ။ [PubMed]
27 ။ Whittle S က, et al Yap ကို MB, Yucel M က။ Prefrontal နှင့် amygdala volumes ကိုမိဘ-ဆယ်ကျော်သက် interaction ကနေစဉ်အတွင်းဆယ်ကျော်သက် '' ကိုထိခိုက်အပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2008; 105: 3652-3657 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ Uhlhaas PJ, Roux က F, အဆိုတော် W က, Haenschel ကို C, Sireteanu R ကို, Rodriguez အီးအာရုံကြော synchrony ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတညျလူသားတို့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်နှောင်းပိုင်းကရငျ့နှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထင်ဟပ်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2009; 106: 9866-9871 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ ကာဇီ BJ, Getz S ကိုသွပ်ရည်စိမ်အေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008; 28: 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Geier CF, Terwilliger R ကို, Teslovich T က, Velanova K သည်, Luna ခနုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2010; 20: 1613-1629 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ ဗန် Leijenhorst L ကို, Zanolie K ကိုဗန် Meel CS, Westenberg pm တွင်, Rombouts လုပ် SA, Crone EA ၏။ အဘယ်အရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလှုံ့ဆျော? မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ် sensitivity ကိုဖြန်ဖြေဦးနှောက်ဒေသများ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2010; 20: 61-69 ။ [PubMed]
32 ။ ချိန် J ကိုအဲလ်ဘတ်က D, O 'Brien L ကို, Uckert K ကို Steinberg အယ်လ်ရွယ်တူချင်းဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry အတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေတိုးမြှင့်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2011; 14: F1-F10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ စမ်းသပ်လေ့လာမှု: Gardner က M, Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စွန့်စားမှု preference ကိုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အောင်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Peer ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2005; 41: 625-635 ။ [PubMed]
34 ။ Romer ဃဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်လျှော့ချ: တစ်ခုပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ် 2003 ဆီသို့။ တထောင်သပိတ်: Sage ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း။ 2003
35 ။ လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000; 24 (4): 417-463 ။ [PubMed]
36 ။ Sisk CL, Foster DL ။ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အာရုံကြောအခြေခံ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004; 7: 1040-1047 ။ [PubMed]
37 ။ Naninck EF, Lucassen PJ, ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျရောဂါအတွက် Bakker ဂျေလိင်ကွဲပြားမှု: လိင်ဟော်မုန်းအားနည်းချက်ဆုံးဖြတ်ရန်သလဲ? Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ်။ 2011; 23: 383-392 ။ [PubMed]
38 ။ Schneider အမ်အပျိုဖော်ဝင်ဆေးခြောက်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များအဘို့အလွန်အားနည်းချက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအဖြစ်။ စွဲဇီဝဗေဒ။ 2008; 13: 253-263 ။ [PubMed]
39 ။ der Jugend အတွက်Bühlerအေ Risikoverhalten ။ ခုနှစ်တွင်: Uhlhaas PJ, Konrad K ကိုအယ်ဒီတာများ။ der Adoleszenz အတွက် Strukturelle Hirnentwicklung ။ စတုဂတ်: Kohlhammer; 2011 ။ စစ။ 189-205 ။
40 ။ လျူက X, Somel M က, တန် L ကို, et al ။ cortical Synaptic ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ extension ချင်ပန်ဇီမျောက်နှင့်မျောက်များကနေလူသားမြားသထူးခြားမှုဖြစ်စေသည်။ မျိုးရိုးဗီဇသုတေသန။ 2012; 22: 611-622 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
e1 ။ Hashimoto T က, ငုယင် QL, Rotaru: D, et al ။ မျောက် prefrontal cortex အတွက်ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor alpha1 နှင့် alpha2 subunit စကားရပ်၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။ ဟားဗတ်။ 2009; 65: 1015-1023 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
e2 ။ Wahlstrom: D, Collins P ကို, White, T, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopamine neurotransmission အတွက် Luciana အမ် Developmental အပြောင်းအလဲများကို: အကဲဖြတ်အတွက်အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပြဿနာများကို။ ဦးနှောက်နှင့်အသိမှတ်ခံစားမှု။ 2010; 72: 146-159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
e3 ။ Sowell ER, Thompson ကလေး, Leonard CM, SE, ကံ, E, Toga AW မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သာမန်ကလေးတွေအတွက် cortical အထူနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ longitudinal မြေပုံ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်: အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2004; 24: 8223-8231 ။ [PubMed]
e4 ။ Giedd ဖြစ်မှု။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004; 1021: 77-85 ။ [PubMed]
e5 ။ Gogtay N ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L ကို, et al ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2004; 101: 8174-8179 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
e6 ။ Durston S က, et al Davidson MC, စပါး N ကို။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှပျံ့ထံမှတစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2006; 9: 1-8 ။ [PubMed]
e7 ။ Somerville LH, ဂျုံးစ် RM, Casey BJ ။ ပြောင်းလဲမှု၏တစ်ဦးကအချိန်: အစာစားချင်စိတ်မှဆယ်ကျော်သက် sensitivity ကို၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်ဆန္ဒရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို။ ဦးနှောက်နှင့်အသိမှတ်ခံစားမှု။ 2010; 72: 124-133 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
e8 ။ Sisk CL, Zehr JL ။ Pubertal ဟော်မုန်းဟာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူစည်းရုံး။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2005; 26: 163-174 ။ [PubMed]
င ၉ ။ Deutschland ရှိ Lampert T, Thamm M. Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum von Jugendlichen Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) Bundesgesundheitsblatt- Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz ။ 9; 2007: 50-600 ။ [PubMed]
e10 ။ Schlack R ကို, Höllingအိပ်ချ် Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen im Selbstbericht ။ Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) Bundesgesundheitsblatt- Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz ။ 2007; 50: 819-826 ။ [PubMed]
e11 ။ Ravens-Sieberer U, Wille N, Bettge S, et al ။ Deutschland ရှိ Psychische Gesundheit vind Kindern und Jugendlichen BELLA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung -Gesundheitsschutz 2007; 50: 871-878 ။ [PubMed]
e12 ။ Bundeszentrale သားမွေး gesundheitliche Aufklärung (ed ။ ) Repräsentative Wiederholungsbefragung ဗွန် 14- 17-Jährigen und ihren Eltern bis ။ Köln: BZgA; 2006 ။ Jugendsexualität။
e13 ။ Shell က Deutschland Holding ကုမ္ပဏီ (ed ။ ) 15 ။ Jugend 2006 ။ Frankfurt / M က .: Fischer; 2006 ။ Shell က Jugendstudie ။
e14 ။ Lampert T, Mensink, G, Romahn N, et al ။ Deutschland ရှိKöperlich-sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 2007a ။ 50: 634-642 ။ [PubMed]
e15 ။ Lampert T, Sygusch R, Schlack R. Nutzung elektronischer Medien im Jugendalter ။ Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz; Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) Bundesgesundheitsblatt- Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 2007b ။ 50: 643-652 ။ [PubMed]
e16 ။ Deutschland ရှိ Kurth BM, Schaffrath Rosario A. Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen Ergebnisse des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz ။ 2007; 50: 736-743 ။ [PubMed]
Deutsches Ärzteblattအင်တာနေရှင်နယ်မှဆောင်းပါးများကိုဤနေရာတွင်၏ယဉျကြေးထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ် Deutscher Arzte-Verlag GmbH သည်